Showing posts sorted by relevance for query BBC Burmese. Sort by date Show all posts
12/20/2013 09:30:00 PM Myanmar-news
1/22/2014 09:38:00 AM malaysia-news
မလေးရှား နိုင်ငံမှာ တရားမဝင် အလုပ်သမားတွေကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက စတင် ဖမ်းဆီးနေပါပြီ။ ဒီကနေ့ည သန်းကောင်ယံမှာ စဖမ်းမယ်လို့ မလေးရှား အစိုးရဘက်က တရားဝင် ကြေညာထားတာပါ။ ကွာလာလမ်ပူ မြို့စွန်ဘက်မှာ မနေ့ညက ဖမ်းဆီးမှု အခြေအနေကို ကိုယ်တိုင် မြင်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုအောင်ကြီးက အခုလို ပြောပါတယ်။ BBC Burmese
အလုပ်သမားရေးရာ သံမှူး ဦးစိုးဝင်းနဲ့ မေးမြန်းခန်း (အသံဖိုင်)
မလေးရှားမှာ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကြသူတွေ ထဲမှာ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတွေက အများဆုံး ဖြစ်ပြီး မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ နီပေါ စတဲ့ တခြား နိုင်ငံသားတွေ အတော်များများလည်း လာရောက် အလုပ်လုပ်ကြတာမို့ မနေ့က ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပါပါသလား။ ကွာလာလမ်ပူမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးက အလုပ်သမားရေးရာ သံမှူး ဦးစိုးဝင်းကို မေးကြည့်တော့ အခုလို ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်သြဇာကို ထိန်းချုပ်ရင် တပ်ဘက်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်နိုင်မလဲ။
၁၉၆၂ခုမတ်လ၂ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တာ အခုအခါ ၅၂နှစ်ရှိပါပြီ။ အခုအချိန်အထိလည်းစစ်တပ်က နိုင်ငံရေးမှာ သြဇာ ကြီးမားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကို ဒီမိုကရေစီ ဘောင်အတွင်း ဘယ်လိုသွတ်သွင်းသင့်တယ်ဆိုတာ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်လာနေပါပြီ။
တကယ်လို့ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာကို ကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားရင် တပ်ဘက်က ဘယ်လို လက်တုန့် ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ။
သောတရှင်တို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို လာမယ့် မတ်လ ၁ရက် စနေနေ့ည လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
ပါဝင် ဆွေးနွေးချင်သူတွေ ဖုန်းနံပါတ် ၀၀၄၄၂၀၃၆၁၄၄၀၆၄ ကို ဖြစ်စေ၊ burmese @ bbc . co . uk ကို ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြီး မိမိရဲ့ အမည်၊ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ခေါ်ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောခဲ့ရင် ဘီဘီစီက ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်။
1/22/2014 06:19:00 PM political-news
5/23/2014 05:51:00 PM thai-news
12/20/2013 11:25:00 AM political-news
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် နားတဝိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)က တပ်သား စုဆောင်းဖို့ ခေါ်သွားခံရတဲ့ ဒေသခံတချို့ ပြန်လွတ်မြောက် လာခဲ့ပါတယ်။
မန်စီမြို့နယ်နား တဝိုက်က ရွာတွေမှာ KIAရဲ့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခံရသူ ၅၀ကျော် ရှိပြီး အဲဒီထဲက ရှမ်းနီ လူမျိုး ၂၆ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ် လို့ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင် က BBC ကို ပြောပါတယ်။
နောက်ထပ် ကချင်လူမျိုး ၄ယောက်နဲ့ ရှမ်းလူမျိုး ၂၁ယောက် ကျန်နေသေးတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
စခန်းထဲက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးက စစ်သားလုပ်ဖို့ အရည်အချင်းမမှီ လို့ KIA က သူ့ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့အနေနဲ့ နှိပ်စက်ခံရတာ မရှိဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။
KIA မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး အဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်နောင်က တော့ KIA စခန်းမှာ ဒေသခံတွေ ဝင်ထွက် သွားလာ ဆက်ဆံမှုတွေဟာ အရင်ကတည်းက ရှိနေခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
KIA တပ်က ခေါ်သွားတဲ့ ဒေသခံ ရွာသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့၊ ရှမ်းမျိုးနွယ်စု ရေးရာ အဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
KIA ဘက်ကတော့ ရွာသားတွေကို ထိန်းသိမ်းတာဟာ စစ်သား စုဆောင်းရေး အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုပေမယ့် စခန်းမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ ကချင်စကား တတ်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကို လက်ရှိမှာ KIA က စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု သင်တန်းတွေ ပေးနေတယ်လို့ ပြန်လွတ်လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
7/11/2014 01:27:00 PM Myanmar-news
6/26/2014 06:10:00 PM sport-news
6/20/2014 10:19:00 AM Myanmar-news
တန်းတူညီမျှရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး အတွက် ကိုယ်စားလှယ် တွေ အားလုံး ပါဝင် ဆွေးနွေးထား တဲ့ လမ်းပြ မြေပုံတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာ ဖို့ ရည်ရွယ် တဲ့‘ပြည်ထောင်စုသား မွတ်ဆလင်များ ရဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံ’အဖြစ်၊ မကြာခင် မှာ ကျင်းပနိုင် ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ စုစည်းပြီး၊ စီစဉ် နေကြပါ တယ်။
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် တွေကို လည်း တင်ပြထား ပြီး၊ မြို့နယ်အလိုက် ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ရေး လုပ်ငန်း တွေ အပါအဝင်၊ တခြား လိုအပ်တာတွေ ကို စီစဉ်ပြီးတဲ့ အခါ၊ တရားဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း ခွင့်ပြုချက် ထပ်မံ တောင်းခံမယ် လို့ သိရပါ တယ်။
ညီလာခံ ကျင်းပကြတဲ့ အခါ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ က ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ အခြား ဘာသာဝင် ကိုယ်စားလှယ် တွေ ကိုလည်း၊ တရားဝင် ဖိတ်ကြားသွား ဖို့ ပြင်ဆင်နေ တယ် ဆိုပြီး၊ ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မတီ က ပြောပါတယ်။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အမုန်းပွားစေမယ့်၊ အစွန်းရောက် လှုံ့ဆော်မှု တွေ အကြမ်းဖက်မှု တွေ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ နဲ့၊ နိုင်ငံ့ တာဝန်တွေ ကို ဘာသာ လူမျိုး မရွေး နိုင်ငံသားတိုင်း က တန်းတူရည်တူ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ရဖို့လို ကိစ္စချင်းရာတွေ ကို၊ ဆွေးနွေးသွားမယ် လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အင်မတန် ထိလွယ် ရှလွယ် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး မှာ၊ ဒီလို ညီလာခံ ကျင်းပဖို့ လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်ရပေမယ့်၊ အာဏာပိုင်တွေ အပါအဝင်၊ ကျန် ပြည်သူအများ က နားလည်မှုနဲ့ ပူးပေါင်း ကူညီလာမယ် လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ကျင်းပရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှုး ဦးအုန်းမောင် က ဆိုပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်က ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင်တွေ အားလုံး ပါဝင် တဲ့ ညီလာခံတစ်ခု ပျဉ်းမနား မှာ ကျင်းပပြီးကတည်း က ဒါဟာ ဒုတိယ အကြိမ် ညီလာခံ ဖြစ်လာမှာပါ။
6/15/2014 12:26:00 PM sport-news
6/14/2014 01:49:00 PM political-news
6/14/2014 01:48:00 PM political-news
6/13/2014 09:53:00 AM sport-news
မိနစ် ၉၀ မှာ ဘရားဇီးက ၁ ဂိုး ထပ်မံသွင်းယူပြီး ၂၀၁၄ခုနှစ် ကမ္ဘာဖလားပွဲ ဖွင့်ပွဲမှာ ၃ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူသွားပါတယ်။
မိနစ် ၇၀ မှာ ဘရားဇီးက ပယ်နယ်တီ ကန်ခွင့်ရပြီး တဂိုး ထပ်မံရသွားပါတယ်။ ဘရားဇီး အသင်းရဲ့ ဂိုး ၂ ဂိုးစလုံးကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ နံပါတ် (၁၀) နေမာက သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၈ မိနစ်အကြာမှာ ဘရာဇီးအသင်းက တဂိုးပြန်သွင်းလိုက်လို့ သရေဖြစ်ပါပြီ
၂၀၁၄ခုနှစ် ကမ္ဘာဖလားပွဲ စတင်ပြီး ၁၁ မိနစ် အကြာမှာ ခရိုးအေးရှား က ဘရားဇီးကို တဂိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရားဇီ3း- ခရိုအေးရှား 1
၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အဖွင့်ပွဲအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြတဲ့ အိမ်ရှင် ဘရာဇီးလ်နဲ့ ဥရောပ ခရိုအေးရှား အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ် ပြီးဆုံးသွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီးလ်အသင်းက ဘရာဇီးလ်ပီပီ တစ်ဦးချင်း ခြေစွမ်းခြေစကို ပြသ တိုက်စစ်ဆင် ကစားသွားနိုင်သလို ခရိုအေးရှား အသင်းကလဲ သွက်လက်တဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အပြန်အလှန် ထိုးဖောက် ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်း တစ်ပိုင်းလုံးက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အပြည့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ အခြေအနေမှာ ခရိုအေးရှားအသင်းက ပင်နယ်တီ ပေးလိုက်ရပြီး ပွဲရဲ့ အနေအထားက လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်ဖက်က ဟန်ဆောင်လှဲချတယ်လို့ ယူဆလို့ ရတဲ့ အနေအထားမှာ ပင်နယ်တီ ပေးခံရတဲ့အတွက် ခရိုအေးရှားတွေ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားသွားပုံ ရပါတယ်။ ၂ ဂိုး ၁ ဂိုး အနေအထားမှာ ပွဲက အေးစက်စက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒုတိယပိုင်း မိနစ် ၉၀ (နေမာလူစားလဲ ထွက်သွားပြီး) မှာ နံပါတ် ၁၁ အော်စကာက ၂၂ ကိုက် အကွာကနေ ကန်သွင်းယူပြီး တတိယဂိုး သွင်းယူကာ ဘရာဇီးလ်တွေဟာ အနိုင်နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
6/08/2014 12:41:00 PM world-news